သို့မဟုတ် Pays Basque ရဲ့ မြို့တော်
Bayonne မြို့တော်ကို Euskal Herria သားတွေရဲ့ မူရင်းဘာသာစကားနဲ့ BAIONA
Façades de maisons de la vieille ville de BAYONNE (Pays Basque) ပြူတင်းတံခါးတွေရဲ့ အရောင် . .. .. ...... အနီရယ် အစိမ်းရယ် ဆိုတာ ဒီ ဒေသရဲ့ သင်္ကေတပါ …. . ...... …… . . . . .. .. ဘာမဟုတ်တဲ့ ဒီ သစ်သား ပြူတင်း တံခါးပေါက်တွေကို မြင်တွေ့ရတာကိုက နှစ်လိုဖွယ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပါ၊
Pays Basque ရဲ့ မြို့တော် Bayonne ကို တနှစ်တခေါက်ဆိုသလို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်၊ ငါးခေါက်ခြောက်ခေါက်
ရှိခဲ့ပါပြီ၊ ဒီဒေသအကြောင်းကိုတော့ သေသေချာ မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး၊ အတိုအစ အပိုင်းအစများသာ
ရေးဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီလို များပြားလှတဲ့ အတိုအစတွေကို ပေါင်းစပ်ဖို့ ကလည်း ခက်ခဲနေသလို ဖြစ်နေရလို့ပါ၊
အဲဒါတွေကို အခုဖော်ပြဖြစ်တဲ့အခါမှာ အကြောင်းအရာတူ တာတွေ ရှိနေခဲ့ရင် သည်းခံကြဖို့ ကြိုတင်
နှစ်ထောင်ကျော် သမိုင်းသက်တမ်း ရှိခဲ့ပြီလို့ ပြောကြတဲ့ ဒီအရပ်ဒေသရဲ့ သမိုင်းကြောင်းက
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပါ၊ ပြင်သစ်လည်း မဟုတ် စပိန်လည်း မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောကြတဲ့ Euskal
Herria ခေါ် ဒီ ဒေသရဲ့ အရုပ် အရိပ် အရောင်တွေကို မောင်ရင်ငတေရဲ့ မြင်မိတဲ့ အမြင်ကတော့ စပိန်နဲ့ ပိုတူ ပိုနွယ်ပါတယ်၊
ဒီဒေသသားများရဲ့ ရုပ်ရည်ကိုတော့ မောင်ရင်ငတေ တွေးနေဆဲမှာ . …
Façades de maisons de la vieille ville de BAYONNE (Pays Basque) ပြူတင်းတံခါးတွေရဲ့ အရောင် . .. .. ...... အနီရယ် အစိမ်းရယ် ဆိုတာ ဒီ
ဒေသရဲ့ သင်္ကေတပါ …. . ...... …… . . . . .. .. ဘာမဟုတ်တဲ့ ဒီ သစ်သား ပြူတင်း တံခါးပေါက်တွေကို
မြင်တွေ့ရတာကိုက နှစ်လိုဖွယ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပါ၊